77% Shirkadaha Dalbanaya Shaqaalaha Gunnada Gunnada Yar ee Yar oo leh 10 shaqaale ah oo ka yar | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara77% Shirkadaha Dalbada Gunnada Shaqada Waqti-Gaaban ee Shaqaalaha Aan Ka Yar 10 Shaqaale
10 / 04 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TURKEY
Boqolkiiba shirkadaha codsanaya gunnada shaqada muddada-gaaban ayaa ka yar boqol
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk waxay sameysay qiimeyn ku saabsan ajendaha.
Isaga oo sharraxaya in nooca cusub ee coronavirus (Kovid-19) faafida uu bilaabay inuu siinayo adeegyo bulshada muwaaddiniinta tan iyo markii uu cudurku dillaacay, Wasiirka Selçuk wuxuu xasuusiyay in warbixinnada caafimaad ee bukaanka iyo dawooyinka la qoro ee dhacayaa wixii ka dambeeya 1da Jannaayo iyo wixii ka dambeeya ay ansax noqon doonaan hanaankan.
Wasiir Selçuk wuxuu carrabka ku adkeeyay in 227-ka wasaaradood ee adeegga ah ay yihiin kuwo si qalliin ah lagana doonayo inay muwaaddiniinta kula taliyaan inaysan jidadka u baxin haddii aysan ahayn waajib.
On su'aasha ku saabsan kaalmada bulshada, bixinta macluumaadka ku saabsan gargaarka ilaa iyo haatan la siiyaa in Selcuk, "Turkey ee 1003 kaalmada bulshada iyo midnimo tahay aasaaska. Waxaan u diraa saamiyo xilliyeed saldhigyadeena bil kasta. Ilaa bishii hore, waxaan dirnay 135 milyan oo liras ah duurka. Laga soo bilaabo bishii hore, waxaan tiradaas ku kordhinnay 180 milyan oo lira ah oo ah warqadda Madaxweynaha. Maalmaha soo socda, waxaan ku kordhin doonnaa jaantuskan xitaa intaa ka sii badan. Sidaa darteed, waxaan sii wadaynaa inaan la kulanno baahiyaha muwaadiniinteenna oo leh saami wadaag. ayuu hadlay.
“Shuruudo ayaa loo dejiyey Wejigii Labaad ee Barnaamijka Taageerada Bulshada”
Wasiirka Selçuk wuxuu caddeeyey inay isku dayayaan inay yareeyaan saameynta dhaqan-dhaqaale ee coronavirus ku yeelan karto muwaadiniinta iyo culeyskooda:
Dareenkan, waxaan ku dhawaaqnay barnaamij taageero bulsheed oo hoos imanaya Xirmooyinka Dhaqaalaha Xasilloonida Dhaqaale. Waxaan si adag ula shaqeynaa Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda. Waxaa jira 3 weji oo hoos yimaada Barnaamijka Kaalmada Bulshada. Wajiga koowaad, waxaan u jeednay inaan gaarno muwaadiniinteenna, kuwaas oo ah kooxda ugu dakhliga ugu yar ee bulshadayada, oo aan gaadhnay 1 milyan 2 kun oo qoys. Waxaan gaarsiinay 111 lira qoysaskaan.
Markaan dejino shuruudo mar labaad wajiga 2, waxaan sameyneynaa shuruudaas, oo hadda, waxaan siin doonaa muwaadiniinteenna 1000 liras dheeraad ah midkiiba. Macnaha guud, waxaan higsaneynaa inaan gaarno 2 milyan 300 kun oo qoys. Wajiga 3-aad wuxuu noqon doonaa mid ku saleysan baahida, waxaanan sii wadaynaa daraasadaha kaabayaasha. Waxaan dooneynaa in muwaadinku uusan isku xirnaanin inta hawshani socoto. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in lagu dhawaaqi doono barta internetka ee Wasaaradda ee la xiriirta taageerooyinka, ayuu Wasiir Sel askeduk ka codsaday shacabka inaynan ixtiraamin ogeysiisyada kale, fariimaha WhatsApp.
Isagoo sheegay in looma baahna in la codsado wejiyada 1 iyo 2, Selçuk wuxuu carabka ku adkeeyay in wajiga 3 uu ku saleysan yahay baahida.
"Waxaan siin doonnaa Taageerada Dakhliga inta u dhaxaysa 1752 Liras iyo 4 380 Liras waxaan siineynaa Shaqaalaheenna"
Su’aasha ku saabsan Gunnada Shaqada Muddada-Gaaban, Wasiir Selcuk wuxuu caddeeyey in tani ay tahay barnaamij ay ku hawlgalaan haddii ay dhacdo in waxqabad kasta oo ka jira goobta shaqada uu joogsado gabi ahaanba ama qayb ahaan ama saddex meelood loo dhigo.
Selçuk wuxuu la wadaagay macluumaadka soo socda isagoo sheegay in celcelis ahaan shaqaalaha Gunnada Gunnada Gaaban laga qaadayo lacagta cayrta 12-kii bilood ee la soo dhaafay isla markaana boqolkiiba 60 dakhligooda guud la siin doono:
- Markaan nidhaahno 60 boqolkiiba dakhliga guud, waxaa loo malaynayaa in 40 boqolkiiba uu sii jiri doono, laakiin ma ahan. Heerkani wuxuu gaarayaa boqolkiiba 75-78 markii aan shabaqa soo galno. Shaqaalaheenna, oo iskucelcelis ahaan soo xareystay 12-kii bilood ee ugu dambeeyay oo ahaa 2943 TL, wuxuu heli doonaa illaa 75% mushaarkiisa. Muddadan, waxaan siin doonaa shaqaalaheena mushaar u dhexeeya 1752 liras iyo 4 380 liras iyo taageerada dakhliga. ”
Selçuk wuxuu xasuusiyay in shuruudihii codsiyada la fududeeyay, tirada dukumiintiyada la codsaday la dhimay, waxay yareeyeen tirada 600 maalmood ee bixinta lacagta ah ilaa iyo 450, iyo inay ku hoos jiraan heshiis 120-maalmood ah oo adeegga adeegga ah illaa 60 maalmood, sidaas darteedna waxay ku nuuxnuuxsadeen inay awood u siinayeen shaqaale badan inay ka faa'iidaystaan ​​taageeradan.
"Waxaan sugeynaa codsiyada goobaha shaqooyinka ay xiranyihiin sababo la xiriira awood xumo darteed." Isaga oo wacaya, Selçuk wuxuu sheegay in codsiyada la isku dayay in sida ugu dhakhsaha badan loogu dhammeeyo. Isagoo tilmaamay in taageeradani ay ilaalinayso shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha labadaba, Selçuk wuxuu xasuusiyay inaysan jirin wax farqi ah oo u dhexeeya waaxda iyo tirada shaqaalaha codsiyada.
“77 boqolkiiba shirkadaha dalbadayaasha ah waxay leeyihiin wax ka yar 10 shaqaale ah”
Wasiir Selçuk wuxuu yidhi, “77% ka mid ah shirkadahayada wax ka dalbaday Gunnada Gunnada Gaagaaban illaa iyo hadda waa shirkadahayada wax ka yar 10 shaqaale ah.” ayuu yiri.
Isagoo ku nuuxnuuxsadey in howsha codsigeygu ay ansax noqon doonto 3 bilood, Selçuk wuxuu tilmaamay in Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan uu awood u leeyahay inuu kordhiyo mudadan markii loo baahdo.
Zehra Zümrüt Selçuk wuxuu cadeeyay in talaabooyin adag la qaaday, talaabooyin la qaaday 6-dii saacadoodba mar, oo laga mamnuuco dadka soo booqda su'aal laxiriirta talaabooyinka ku saabsan guryaha daryeelka iyo xarumaha kale ee daryeelka. Selçuk wuxuu yidhi, "Ilaa hadda, waxaan sii wadaynaa qaadista taxaddarradeenna iyada oo la tixraacayo qawaaniinta ay Wasaaradda Caafimaadka u dejisay guryaheena daryeelka caafimaadka iyo xarumaha daryeelka. Waxaan sameyneynaa koontarooladooda. ” muujinta ereyga.
"Xitaa haddii masaafadaheenna ay fog yihiin, qalbigeenna yuusan fogaan."
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Selcuk ayaa yiri waxa soo socda ee ku saabsan taladooda qoysaska:
Sii joogida guriga waxay kaloo na siisay fursad aan waqti badan kula qaadano qoysaskeena iyo kuwa aan jeclahay. Waxay kaloo keenaysaa inaan is aragno midba midka kale. Waxaan sidoo kale u adeegsan karnaa howshan inaan ku dhameystirno shaqooyin badan oo aan rabno inaan qabanno laakiin aan dhameystirneyn sababtoo ah xawaaraha adduunka. Aynu wakhti badan la qaadanno kuwa aan jecel nahay. Aynu dhammaystirno shaqooyinkeenna aan dhammayn, buugaag aannaan akhriyi karin, iyo hiwaayadaha. Waxaan rumeysanahay in qoysaskeena ay midba midka kale midba midka kale midba midka kale ka mid ahaan doono.
Selçuk wuxuu ku yidhi qoysaska, “Noloshu waxay ku habboon tahay guriga, aynu guriga iska joogno. Tan ugu muhiimsan, noloshu waxay ku habboon tahay qoyska. Yaanan nus noqon, aan guriga iska joogno. Waxaan haysannaa fursado badan oo dhijitaalka ah, aan u yeerno odayaashayada. In kasta oo masaafadaheenna ay aad u fog yihiin, haddana qalbiyadeenu ma aha inay sii fogaan karaan. Waxaan rajeynayaa in illaa iyo inta aan wadnahayaga fogeynno, qoysaskayaga inbadan ayaa lala xiriirin doonaa. fariinta ayuu siiyay.
"Waan ka adkaan doonnaa howshan iyo soosaarka marwalba way sii socon doontaa"
Markii laga jawaabayo su'aasha ku saabsan tillaabooyinka la qaaday si aan si xun saameyn ugu yeelan nolosha shaqada ee nidaamka, Selçuk wuxuu carrabka ku adkeeyay in ujeedkooda ugu weyni yahay inay ilaaliyaan oo kordhiyaan shaqaalaha, loo shaqeeyaha, iyo shaqada. Selçuk wuxuu xasuusiyay in gunada shaqa-gaaga ah ee waqtiga-gaaban lagu kordhiyey 2 bilood ilaa 4 bilood, iyo in la qaaday tilaabooyin Xidhmada Dhaqaalaha, “Shaqaalayntu aad ayey muhiim u tahay in la ilaaliyo shaqaalaha. Sababtoo ah waan uga badbaadi doonnaa howshan waxsoosaarkuna had iyo jeer wuu sii socon doonaa. Dhaqaalahayagu weligiis wuu noolaan doonaa. ” helay qiimaynta.
Isagoo hoosta ka xariiqay inay xiriir joogto ah la leeyihiin wasaaradaha ay khuseyso iyo ururada aan dowliga ahayn, gaar ahaan Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda, si loo ciribtiro dhibaatooyinka ka jira garoonka, ayuu yiri Selçuk, “Waxaan marwalba u sheegayaa shaqaaleeyaasheena; waxaan uga gudbi doonnaa geedi socodkan adag. Aad ayey muhiim u tahay in la ilaaliyo shaqada. Waxaan aaminsanahay inaan ka gudbi doonno howshan annagoo ilaalinayna shaqaalaynta, sii wadidda wax soo saarka iyo taageerada dakhliga ee muwaadiniinteenna. ” ayuu yiri.
Shaqaalaha TCDD iyo TCDD Tigidhada Tigidhada Bandhigga Bandhigga Dunida
Going by wadada ka Turkey si Russia News Muhiim Waayo, kuwa
Digniinka Codsadayaasha Codsashada Tareenka Darawalka ee Kars
Shirka Wadashaqeynta iyo Iskaashiga Xirfadaha Shirkadaha Tareenada Swiss
Xirmooyinka Dhaqaalaha Xasilloonida Dhaqaale
In kastoo TÜVASAŞ ay la kulmeyso da 'dahab ah, TÜVASAŞ iyo shaqaalaheeda ayaa isku dayaya